Isignesha Isikhumba Ikesi Isiqeshana Cellet Elite Isikhumba Case for BlackBerry 8100 Pearl — Everything for BlackBerry. InfoResheniya / bbry.net
Isignesha Isikhumba Ikesi Isiqeshana Cellet Elite Isikhumba Case for BlackBerry 8100 Pearl
Case Corporate for ukuvikelwa egcwele isikhumba superior smartphone sika. Ezimweni ezingavamile lesikhumba ukumisa. Umklamo ezimangelengele kanti clip eyizingqabavu kwenza le-accessory ye ikhambi best for umuntu omatasa.
Case Corporate for ukuvikelwa egcwele isikhumba superior smartphone sika. Umklamo ezimangelengele kanti clip eyizingqabavu kwenza kube ikhambi best for umuntu omatasa. Ngenxa zokwakha esezingeni eliphezulu wenkampani nangokucikoza Cellet the waqaphela ifomu-factor, isesekeli ibukeka hle, kuyoba isikhathi eside futhi kuyoba umsizi enhle kakhulu isigqi elihlale yokuphila.
Cellet Elite Isikhumba Case senziwa ngendlela yokuthi kwanele ukugqoka once, futhi ukuqedela umsebenzi nefoni akufanele zisuswe — siyindlala for lesikhumba nesembozo. Yakhelwe ngokuqondile i BlackBerry 8100 Pearl (efanelekayo 8110/8120, kodwa kulokhu, ikhamera kuzotholakala icala), Uyaphinda zonke izinhlobo zokusebenzelana apharathasi inikeza i kufanelekile olunembile. Zonke izingxenye functional bahlale ukufinyelela kubo cutouts olunembile enikeziwe. With a cover esinjalo asisho ukuthi akudingeki film: the front okuyingxenye limbozwa faka aminyene esobala, esivikela hhayi kuphela screen, kodwa ikhibhodi.
Qedela clip ikhava esikhiphekayo ingasetshenziswa njengendlela accessory ye ahlukene noma njengoba holster. Isiqeshana ikuvumela ukuba uxhume icala Bopha ibhande lakho noma esikhwameni ithinte, futhi njalo baphathe nabo, ngaso leso sikhathi okumele ukuba zamukele izingcingo ezingabanjwanga nemibiko.
Isignesha Isikhumba Ikesi Isiqeshana Cellet Elite Isikhumba Case for BlackBerry 8100 Pearl, black LBLK8100E ●